‘म सेक्सभन्दा धेरै गुणा माथि छु’, अभिनेत्री लीजा हेडन - Super Hit News
‘म सेक्सभन्दा धेरै गुणा माथि छु’, अभिनेत्री लीजा हेडन
आयशा र रास्कल्स,क्वीन,ए दिल है मुश्किललगायतका फिल्मकी हिरोइन लीजा हेडनको ग्ल्यामर अवतारको बारेमा बलिउडकर्मीले चासो दिने गरेका छन् । मोडलका रुपमा चर्चित भएकी लिजाले आफूलाई एकाएक फिल्म अभिनयमा लगाइन् । आफूलाई ‘सेक्स सिम्बोल’ ठान्ने लीजा बलिउडको आफ्नो यात्रा सफल भइरहेको दावी गर्छिन् । उनीसँग भारतीय मिडियाले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप –
यहाँले पहिला एस्ट्रोनट र पछि फेरि योगा प्रशिक्षक बन्ने सपना बनाउनु भएको थियो । तर पछि मोडलिङ हुदै फिल्म अभिनयमा आउनु भयो । तपाईका ती पुराना सपना के भए ?
– यो कुरा सा“चो हो की मैले फिल्ममा आउने बारे कहिल्यै पनि सोचेकी थिइन“ । जब म १९ वर्षकी थिए“, त्यतिबेला मलाई एउटा साथीले मोडलिङमा लाग्ने सल्लाह दिएको थियो । साथीको सल्लाहमा म मोडलिङ एजेन्सीमा पुगें । त्यसपछि मलाई मोडलिङको अफर लाइन लागेर आउन थाल्यो । मोडलिङ गर्दा गर्दै म फिल्म अभिनयमा आइपुगें । तर, म फिल्ममा अचानक आइपुगेकी भने होइन । अष्टे«लीयामा स्कुल पढ्दाखेरि मैले अभिनय सिकेकी थिए“ । त्यसकारण अभिनयप्रतिको चाहना मेरो अन्तरमनमा थियो । योगा टिचर बन्ने मेरो सपना टुटीसकेको भने छैन । म अझै पनि योगा बन्न चाहन्छु । तर अचेल त्यसका लागि पर्याप्त समय मस“ग छैन । टाइम म्यानेज गरेर योगा टिचर बन्ने मेरो सपना अबश्य पूरा गर्नेछु ।
फिल्ममा तपाई ‘हट एण्ड सेक्स सिम्बोल’ का रुपमा देखिने गर्नुभएको छ । योबाहेक अरु गर्ने मन छैन ?
मान्छेहरुलाई म हट एण्ड सेक्सीलाग्छ भने मलाई यसमा केही समस्या छैन । तर मेरो नामको अगाडि ‘सेक्स सिम्बोल’ को ट्याग जोड्नु गलत हो । किनभने म सेक्स सिम्बोलभन्दा धेरै गुणा माथि छु । मलाई बिश्वास छ की म फिल्म दुनीया“मा जतिजति झ्याम्मीदै जानेछु, मान्छेहरु मलाई अझ सेक्सीका साथै ट्यालेन्ट देख्ने छन् । दर्शकले ममाथि राखेको बिश्वासप्रति खरो रुपमा उत्रने छु । मान्छेहरुले मभित्र लुकेको प्रतिभा पनि देख्न पाउने छन् ।
तपाईका धेरै फिल्म छैनन् । तर धेरै नै नखरा पार्ने गरेको सुन्न पाइन्छ नि । यो सबै नखरा आफू सुपर मोडेल भएकाले गर्नुभएको हो ?
सायद तपाई सही कुरा गर्दैहुनुहुन्छ । मैले मोडलिङको दुनीया“मा धेरै नाम कमाए“ । छोटो समयमै आफूलाई स्थापीत गराए“ । मान्छेहरु मलाई चिन्छन्, त्यसकारण म फिल्ममा पनि सफल भइरहेकी छु । मेरो बिश्वासलाई नखरा नभनिदिए हुन्थ्यो । म नखरेबाज छैन ।
तपाई अष्ट्रेलिया हुर्कीनु भयो, बलिउडमा सफल हुनका लागि हिन्दी राम्रो बोल्न जान्नुपर्छ । तर तपाईको बोलीमा त पूरै इङ्लीस टोन आउछ । यो कुराले तनाव दिएको छ की छैन ?
राम्ररी हिन्दी बोल्न नआउने भएकाले मैले कतिपय मामलामा कम्प्लेन सुन्नु परेको छ । कैटरिना कैफ जस्तो हिरोइनलाई त मान्छेहरु हिन्दी बोल्न नजान्ने भनेर कमेन्ट गर्छन भने म त के हु र ? म मान्छु हिन्दी फिल्म उद्योगमा काम गर्नु छभने यहाको भाषा बोल्न जान्नु जरुरी छ । त्यसकारण मैले केही समय हिन्दी भाषाको ट्युशन लिएँ । अहिले त मेरो हिन्दी राम्रै छ क्यारे ।
बलिउडमा हिरोइनबीचको प्रतिस्पर्धा बढ्दै गइरहेको छ । यस्तोमा के तपाईले बलिउडमा फुलटाइम करिअर बनाउने योजना बनाउनु भएको छ ?
साच्चै भन्ने हो भने मैले कहिल्यै पनि भबिष्यको योजना बनाएर काम गर्ने गरेकी छैन । त्यसकारण भबिष्यमा म बलिउडमा रहुला–नरहुला भन्ने बारेमा अहिले नै केही भन्न सक्दिन“ । तर अहिले भने म बलिउडमा करिअर बनाउने बारेमा पोजेटिभ छु र आफूमा भएको प्रतिभाको वलले सफलताा चुम्ने कोसिसमा लागेकी छु । मैले अहिलेसम्म जम्मा दुईटा फिल्ममा काम गरेकी छु । मैले यहा“ अझ धेरै कुरा सिक्न बा“की छ । मस“ग समय छ, लगाव छ । मलाई बिश्वास छ, मैले आफ्नो लक्ष्य हासिल गरेरै छाड्ने छु ।
तपाई साउथका फिल्ममा पनि ट्राइ गरिरहेको सुन्नमा आएको छ नि ?
यसमा नराम्रो के छ ? यदि साउथ फिल्ममा राम्रो अफर आयो भने म त तयार छु । यदि मलाई कुनै एक्शन फिल्मको अफर आयो भने म स्वीकारीहाल्छु । मलाई एक्शन फिल्म निकै मन पर्छ । म चाहन्छु की कुनै फिल्ममा म आफैले स्टण्ट गर्न पाउ“ । मलाई बिश्वास छ की म यो सब निकै राम्रोस“ग गर्न सक्छु । त्यसबाहेक मलाई कमेडी फिल्म पनि मन पर्छ । हास्नु र हसाउनु दुवै रमाइलो काम हो ।
Tags: Lisa Hyden Bollywood Actress
Next एमी ज्याक्सनले देखाइन् गर्भवती अवतार